Izityhilelo ezili-10 ezivela e-US Ilungelo lokwazi uPhando- Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Matshi 30, 2020 by UStacy Malkan
Nceda uxhase uphando lwethu lokutya ngokwenza umnikelo otsalwe kwirhafu namhlanje.
Amaxwebhu angaphakathi eMonsanto ikhutshwe ngo-2019 ibonelela ngenkangeleko enqabileyo ngaphakathi kwezibulali zinambuzane kunye neenkampani zokutya ezizama ukujongela phantsi amaqela anomdla noluntu kunye neentatheli. Amaxwebhu (athunyelwe apha) bonisa ukuba iMonsanto kunye nomnini wayo omtsha, uBayer, babexhalabile ngakumbi malunga ne-US Right to Know, iqela elingenzi nzuzo eliqale ukuphanda ishishini lokutya kwi-2015. Uxwebhu lweMonsanto, "Isicwangciso se-USRTK siyakuchaphazela yonke le shishini" kwaye "sinokubangela umonakalo omkhulu." Jonga ingxelo kwiGuardian, "Kutyhilwe: njani 'indawo yezobuntlola' kaMonsanto ejolise kwiintatheli kunye nabaphembeleli. "
Ukusukela oko samiselwa ngo-2015, i-US Right to Know ifumene amakhulu amawaka amaphepha eenkampani zangaphakathi kunye nezolawulo ezityhila indlela ukutya kunye neenkampani zokubulala izitshabalalisi ezisebenza ngasemva ukuze zisebenzise inzululwazi, izifundiswa kunye nomgaqo-nkqubo wokunyusa inzuzo yabo ngokuhlawula uluntu impilo kunye nokusingqongileyo. Umsebenzi wethu ube negalelo ukuya kwisithathu ENew York Times uphando, Sibhozo amaphepha ezifundo malunga nefuthe lokudibana kwinkqubo yethu yokutya, kwaye iindaba zehlabathi babhala ukuba zimbalwa kangakanani ukutya okungenamsoco kunye neenkampani zokubulala izitshabalalisi ezisebenzisa iindlela ngeendlela ezingalunganga nezingafanelekanga zokuxhasa ukutya okungafunekiyo. Nazi ezinye zeziphumo zethu eziphezulu ukuza kuthi ga ngoku.
1. IMonsanto ifumana inkxaso-mali kwizifundo "ezizimeleyo" ukukhuthaza nokugaya iimveliso zeyeza
Ilungelo lase-US lokwazi libhaliwe imizekelo emininzi yendlela iinkampani zokubulala izitshabalalisi zixhomekeka kakhulu kwizifundiswa ezixhaswa ngemali ngurhulumente ukuba zincedise kwi-PR kunye nasekubambeni. Iphepha eliphambili leSeptemba 2015 ENew York Times Inqaku lityhila ukuba uMonsanto wabhalisa abafundisi, kwaye wabahlawula ngokufihlakeleyo, ukuba baphikisane nemithetho yokubhalwa kweGMO. I-WBEZ kamva yanika ingxelo ngomzekelo omnye; indlela uprofesa waseYunivesithi yase-Illinois athola ngayo amashumi amawaka eedola eMonsanto ukukhuthaza nokugaya i-GMO kunye nezibulala-zinambuzane, kwaye iyunivesithi yakhe yafumana izigidi; Akukho nanye kwezo mali ibichazelwe uluntu.
Amaxwebhu axelwe kwi Boston Globe, Bloomberg kwaye UMama Jones Chaza indlela iMonsanto eyabelwe ngayo, ebhaliweyo kunye nokukhuthaza amaphepha e-pro-GMO asuka koonjingalwazi baseHarvard, eCornell nakwezinye iiyunivesithi- amaphepha apapashwe kungakhankanywa nendima kaMonsanto. KwiYunivesithi yaseSaskatchewan, uMonsanto waqeqesha uprofesa kwaye wahlela amanqaku akhe emfundo, ngokwe amaxwebhu axeliweyo by ICBC. Ngesicelo seshishini le-PR lezemveliso yezibulala-zinambuzane, uprofesa weYunivesithi yaseFlorida wakhupha ividiyo ejolise ekuhlaziseni ulutsha lwaseCanada olugxeka ii-GMOs, amaxwebhu axelwe liGlobal News.
Bona yethu Umzi mveliso wePropaganda Tracker amaxwebhu okwenyani asekwe kumaxwebhu kuphando lwethu. Amaxwebhu amaninzi e-USRTK nawo athunyelwe kwifayile ye- Iilayibrari zoShishino lokuTya kunye neMichiza zeUSCF.
2. Iqela lezenzululwazi elingenzi nzuzo li-ILSI liqela elikhuthaza ukutya kunye neenkampani zokubulala izitshabalalisi
NgoSeptemba 2019, ENew York Times uxele "ngeqela lemizi-mveliso elinethunzi" iZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (i-ILSI) elibumba umgaqo-nkqubo wokutya kwihlabathi liphela. Inqaku leXesha licaphula Ucwaningo lwe-2019 ibhalwe ngu-Gary Ruskin we-USRTK enika ingxelo ngendlela i-ILSI esebenza ngayo njengeqela le-lobby elikhuthaza umdla wabaxhasi bayo bokutya kunye ne-pesticide. Jonga ukugubungela isifundo sethu kwi BMJ kwaye Guardian, kwaye ufunde ngakumbi ngombutho iThe Times ichazwe njenge “Elona qela linamandla lokutya ongazange weva ngalo” kuthi Iphepha le-ILSI.
Kwi-2017, uRuskin wabhala-a inqaku lejenali Ukunika ingxelo nge-imeyile ezibonisa iinkokheli zeshishini lokutya ezixoxa ngendlela "ekufuneka bayisebenzise ngayo imibutho yangaphandle" xa bejongana neengxabano malunga nemingcipheko yezempilo yeemveliso zabo. Ii-imeyile zibonisa iinkokheli eziphezulu kushishino lokutya zikhuthaza indlela elungelelanisiweyo yokuphembelela ubungqina besayensi, uluvo lweengcali kunye nabalawuli kwihlabathi liphela. Yabona Ubume beBloomberg, "Ii-imeyile zibonisa indlela ishishini lokutya eliyisebenzisa ngayo 'isayensi' ukutyhala isoda."
Uphando lwe-USRTK lukwakhuthaze a Ibali le-2016 kwiThe Guardian Ukuxela ukuba iinkokheli zeqela elidibeneyo le-FAO / i-WHO elisuse i-glyphosate yeenkxalabo zomhlaza zikwabambe nezikhundla zobunkokheli kwi-ILSI, ethe yafumana iminikelo emikhulu kumzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi.
3. Iindaba ezaphukileyo malunga nokulingwa kweMonsanto Roundup kunye neDicamba
Ilungelo lase-US lokwazi rhoqo liphula iindaba malunga novavanyo lomhlaza we-Roundup nge ICareup Gillam's Roundup kunye neDicamba Trial Tracker, ebonelela ngokujonga okokuqala kumaxwebhu okufumanisa, udliwanondlebe kunye neengcebiso zeendaba malunga nezilingo. Ngaphezulu kwabantu abangama-42,000 abafake isimangalo ngokuchasene neNkampani iMonsanto (ngoku eyeyeBayer) isityhola ngelithi ukubhencwa kweyearbicide ye-Roundup kubangele bona okanye abo babathandayo ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma, kwaye iMonsanto yagquma ubungozi.
Njengenxalenye yenkqubo yokufumanisa, iMonsanto iguqule izigidi zamaphepha eerekhodi zayo zangaphakathi. I-USRTK ithumela uninzi lwala maxwebhu kunye neerekhodi zenkundla ngaphandle kwentlawulo kuthi Amaphepha eMonsanto Amaphepha.
Amafama amaninzi ajikeleze i-United States ngoku ayamangalela i-Monsanto Co yangaphambili kunye ne-BASF ye-conglomerate kumzamo wokubamba iinkampani ziphendule izigidi zeehektare zomonakalo wezityalo amafama athi ngenxa yokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kokhula lokubulala i-chemical dicamba. Ngo-2020, saqala nokuthumela i Amaphepha eDicamba: Amaxwebhu aphambili kunye nohlalutyo kwizilingo.
4. Amagosa aphezulu e-CDC asebenzisana neCoca-Cola ukuyila ingxoxo-mpikiswano yokutyeba kakhulu, kwaye bacebisa uCoca-Cola ngendlela yokumisa i-WHO ekulweni iswekile eyongeziweyo
Amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know akhokelele kwelinye iphepha eliphambili New York Times ibali ngo-2017 enika ingxelo yokuba umlawuli osandula ukuqeshwa wamaZiko oLawulo lweZifo e-US, uBrenda Fitzgerald, wabona uCoca-Cola njengehlakani kwimicimbi yokutyeba kakhulu (uFitzgerald sele arhoxile).
I-USRTK yayiye kuqala ukunika ingxelo ngo-2016 ukuba elinye igosa eliphezulu le-CDC lalinobuhlobo obuhle neCoke, kwaye lazama ukunceda inkampani ekulawuleni i-World Health Organisation kude neenzame zayo zokudimaza ukusetyenziswa kweeswekile ezongeziweyo; Yabona ingxelo nguCarey Gillam, Umlawuli wophando wase-US Right to Know. Umsebenzi wethu nawo ube negalelo kuphononongo olwenziwe ngokubhaliweyo ngu-Gary Ruskin ngeengxoxo phakathi kwe-CDC kunye nabaphathi beCoca-Cola. Mbini amanqaku in BMJ ngokusekwe kumaxwebhu e-USRTK, kunye namanqaku kwi Washington Post, I-Atlanta Journal Constitution, ISan Diego Union Tribune, Forbes, CNN, Politico kwaye Ukuthintela Nika iinkcukacha ezithe kratya malunga nefuthe likaCoke kwiarhente yezempilo kawonkewonke yaseMelika emele ukunceda ukuthintela ukutyeba kakhulu, uhlobo lweswekile 2 kunye nezinye izifo.
5. I-US FDA yafumana iintsalela zeglyphosate kubusi, iisiriyeli zentsana, kunye nokunye ukutya okuqhelekileyo, emva koko wayeka ukuvavanyelwa imichiza
I-FDA ayilukhuphelanga ulwazi, ngenxa yoko i-USRTK iyenzile.
UCarey Gillam waqhekeza iindaba kwi IHotff Post, Guardian kwaye I-USRTK malunga noxwebhu lwangaphakathi lukarhulumente olufunyenwe nge-Freedom of Information Act izicelo ezibonisa ukuba i-US FDA yenze iimvavanyo ezafumanisa ukuba i-glyphosate yokubulala ukhula kuluhlu lokutya okutyiwa kakhulu kubandakanya i-granola, i-crackers, i-cereal yeentsana kunye namanqanaba aphezulu kubusi. I-FDA ayilukhiphanga ulwazi, kungoko ke yenza i-USRTK. Urhulumente warhoxisa inkqubo yakhe yokuvavanya intsalela yeglyphosate ekutyeni, UGillam uxele.
I-FDA iphinde yaqala ukuvavanya kwaye ngasekupheleni kuka-2018 kwaye yakhupha ingxelo ebonise uvavanyo olunomda kakhulu kwaye yaxela ukuba akukho nqanaba likhathazayo le-glyphosate. Ingxelo ibingabandakanyi naluphi na ulwazi i-USRTK egqityiweyo kwii-FOIAs.
6. Iinkampani ezibulala izitshabalalisi zafihla ngasese iqela lezemfundo elalihlasela ishishini lezinto eziphilayo
Iqela elizibiza ngokuba luPhononongo lweziFundo lenze iintloko ngo-2014 ngengxelo ehlasela ishishini lezinto eziphilayo njengobuqhetseba bokuthengisa. Iqela libanga ukuba liqhutywa zizifundiswa ezizimeleyo, kwaye ayamkelanga galelo lishishini; nangona kunjalo, amaxwebhu afunyenwe ngu-USRTK kwaye uxelwe kwi IHotff Post utyhile ukuba eli qela lisekwe ngoncedo lweMonsanto ukuze ibe liqela eliphambili elixhaswa ngemali ngumzi-mveliso elinokuthi linyelise abagxeki be-GMO kunye nezibulala-zinambuzane.
Iirekhodi zerhafu zibonisa ukuba uPhononongo lweziFundo lufumene uninzi lwenkxaso-mali yalo kwiBhunga leNgcaciso yeBiotechnology (i-CBI), iqela lezorhwebo elixhaswe ngemali ziinkampani ezinkulu zezibulali zinambuzane.
7. Iiyunivesithi zibambe iinkomfa ezixhaswa ngemali lishishini lokubulala izitshabalalisi ukuqeqesha oososayensi kunye neentatheli ngendlela yokukhuthaza ii-GMO kunye nezibulala-zinambuzane
Ishishini le-pesticide elixhaswe ngemali "kwiinkampu zeebhutsi" ezibanjelwe kwiDyunivesithi yaseFlorida nakwiDyunivesithi yaseCalifornia, uDavis wadibanisa izazinzulu, iintatheli kunye nabalingane kumzi-mveliso wePR ukuxoxa ngendlela "qhagamshela ngokweemvakalelo nabazali abathandabuzayo”Kwimiyalezo yabo yokukhuthaza ii-GMO kunye namayeza okubulala izitshabalalisi, ngokwe amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know.
Amacandelo amabini angaphambili, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala kwaye Uphengululo lwezifundo, uququzelele iminyhadala yoqeqesho lwemiyalezo, kwaye wabanga ukuba inkxaso-mali ivela kurhulumente, kwimithombo yezemfundo nakwimithombo yoshishino; Nangona kunjalo, ngokwengxelo kwiNkqubela phambili, Imithombo engeyiyo eyemizi-mveliso iyala ukuxhasa ngezimali iminyhadala kwaye ekuphela komthombo wolwazi olwalulandeleka yayiliqela lezorhwebo lezibulala-zinambuzane I-CBI, elachitha ngaphezulu kwe- $ 300,000 kwiinkomfa ezimbini.
8. UCoca-Cola wazama ngokufihlakeleyo ukuphembelela iintatheli zezonyango nezenzululwazi
Amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know kunye ixelwe kwi-BMJ bonisa indlela iinkomfa zobuntatheli ezixhaswe ngemali nguCoca-Cola kwiyunivesithi yaseMelika kumzamo wokudala udaba oluhle lokushicilela iziselo ezineswekile. Xa bacelwa umngeni malunga nenkxaso mali kuthotho lweenkomfa, abafundisi ababandakanyekayo babengenanyani malunga nokuzibandakanya kushishino.
9. ICoca Cola yazibona “isemfazweni” noluntu ngezempilo ngenxa yokutyeba kakhulu
Elinye inqaku lephephancwadi elibhalwe ngokubhaliweyo nguGary Ruskin waseUSRTK kwi Ijenali ye-Epidemiology kunye neMpilo yoLuntu ityhile indlela uCoca-Cola azibona ngayo "emfazweni" kunye "noluntu lwezempilo." Ii-imeyile zikwabonisa iingcinga zenkampani malunga nendlela yokujongana nemicimbi ejikeleze ukutyeba kunye noxanduva kule ngxaki yezempilo yoluntu; Ngakumbi jonga inqaku likaRuskin kwi Iindaba zezeMpilo kokusiNgqongileyo kunye namanye amanqaku eendaba abhalwe ngu-USRTK kwi iphepha lethu loMsebenzi wezifundo.
10. Inkoliso yezifundiswa kunye namanye amahlakani eshishini adibanisa imiyalezo kunye neenkampani zezolimo kunye neenkqubo zabo zePR
Amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know atyhila inyani engazange ichazwe ngaphambili malunga namaqela angaphambili, izifundiswa, kunye nabanye abantu abadibana ne-pesticide kunye neenkampani zokutya ezixhomekeke ekukhuthazeni ubudlelwane bazo noluntu kunye ne-ajenda yokuphembelela. I-USRTK ibonelela ngeenkcukacha ezimalunga namaqela angaphezulu kweshumi elinambini ekhokelayo kumahlakani abonakala ngathi azimele, kodwa basebenza ngokusondeleyo neenkampani kunye neefemu zabo ze-PR kwimiyalezo elungelelanisiweyo yoshishino. Jonga iphepha lethu lenyaniso, Ukulandelela iNethiwekhi yezoLimo yezoLimo.
Sincede ukugcina uphando lwe-USRTK lupheka! Unganegalelo kuphando lwethu ngoku Preon kwaye PayPal. Ndiyacela ubhalisele idilesi yethu ukufumana uhlaziyo rhoqo malunga neziphumo zethu kwaye usijoyine Instagram, Facebook kwaye Twitter Ingxoxo engakumbi malunga nenkqubo yethu yokutya.
Umsebenzi wezifundo, Ukutya kwengqondo, Izifo ezinxulumene nokutya, GMO, Uphando lwethu, Pesticides, Abangcamli Bayer, UCarey Gillam, UGary Ruskin, IMonsanto, Ilungelo lase-US lokwazi, I-USRTK